Caawi Nice | Taageerada BIPOC iyo / ama Ganacsiyada Haweenka Leh
Qoysaska iyo Shaqaalaha Lacagta
Waxay siisaa deeq-lacageed toos ah iyo amaah deyn ah shakhsiyaadka iyo ganacsatada iyadoo diiradda lagu saarayo kuwa ay u badan tahay in laga tago jawaabta siyaasadeed ee xaaladda degdegga ah ee dawladda.
Waxay kujirtaa shaqo ka fadhiisinta, meherada ku meelgaarka ah iyo iskuullada oo la xiro, iyo shaqsiyaadka la halgamaya waajibaadka ilaalinta.
GlobalGiving ayaa dusha kala socon doonta sanduuqa, iyada oo ka dhigi doonta 1,000 deeq oo $ 5,000 midkiiba siiya haweenka ganacsatada ah ee Mareykanka ah si ay gacan uga geysato yareynta baahiyaha deg-degga ah iyo taageeridda soo kabashada muddada fog ee kuwa saamaynta ku yeeshay COVID-19.
Cashuur-dhaafista Fursadda Shaqada
Adeegyada Shaqada Waqooyiga Dakota
Barnaamijka Canshuurta Fursadaha Shaqada waa barnaamij dhiirigelin canshuureed ay bixiso dowladda oo ku dhiirrigeliya loo shaqeeyayaasha inay shaqaaleysiiyaan kooxo cayiman oo dadka ah; dadka inta badan carqalada ku ah shaqada.
Eeg firfircoonida gudaha.
Heerarkan cayiman, 5-15 sano ee amaahda muddada ah illaa $ 200,000 waxaa loogu talagalay ganacsatada yar yar ee aan awoodin inay helaan maalgalinta caadiga ah, ama u baahan maalgelinta farqiga u ah amaahda caadiga ah.
Amaahda 'ILP' waxaa loo isticmaali karaa raasamaalka shaqada, qalabka iyo alaabada ama dhismaha ma guurtada ah.